နိုင်ငံခြားကနေ ဖက်ရှင်ပညာနဲ့ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ တူမလေး မေတိုးခိုင်ရဲ့အမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး အာမေဋိတ်သံပြုရတဲ့အထိ သဘောကျနေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ တူဝရီးဖြစ်တဲ့ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်နဲ့ မေတိုးခိုင်က အမျိုးအရင်းကြီးတွေပီပီ ရုပ်ချင်းဆင်ပြီး အလှကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်ကတော့ သရုပ်ဆောင်လာကမှာ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ဦး အနေနဲ့ ရပ်တည်နေပြီး မေတိုးခိုင်ကတော့ မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးအနေနဲ့ လူသိများနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်နဲ့ မေတိုးခိုင်က “ရူးအောင်ချစ်မယ့်သူ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ အတူတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလို ဓာတ်ပုံတွေအများအပြားကိုလည်း တွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိနြ္ဒာကျော်ဇင်နဲ့ မေတိုးခိုင်က အသက်အရွယ်ကွာခြားတဲ့ တူဝရီးတွေဖြစ်ပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညီအစ်မတွေလို သူငယ်ချင်းလို ရင်းနှီးသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တူမလေးကို အမြဲတမ်း မြေတောင်မြှောက်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်က ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ အရမ်းလန်းနေတဲ့ တူမလေး မေတိုးခိုင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ခ်ျမှာ Share ပြီး “ဟယ်! ပါပါရာဇီရှော့ တော့??” ဆိုပြီး သဘောကျနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မေတိုးခိုင်ကတော့ Manchester Metropolitan University ကနေ Fashion Major နဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖက်ရှင်နဲ့ ပက်သတ်ပြီးလည်း အများနဲ့မတူတဲ့ အိုင်ဒီယာဆန်းတွေရှိတာကြောင့် အဒေါ်ဖြစ်သူ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်ကတောင် အားကျရသူလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မေတိုးခိုင်ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကြည့်ပြီး အိနြ္ဒာကျော်ဇင်လို အာမေဋိတ်သံတွေပြုရတဲ့အထိ သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Eaindra Kyaw Zin & May Toe Khine – မေတိုးခိုင်’s fb